Adeegyada Caafimaadka - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Waaxda Adeegyada Caafimaadka Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxay dooneysaa inay abuurto oo joogtayso jawi iskuul oo dhiirrigeliya oo taageera caafimaadka ardayga, fayoobaanta iyo hanashada tacliinta.
Ardayda waxaa laga filayaa inay kaqeybqaataan dhammaan howlaha, oo ay kujiraan fasaxa banaanka iyo waxbarashada jimicsiga, ilaa amar laga helo bixiyaha xanaanada caafimaadka shatiga leh. Amarku waa inuu ku jiraa sababta xaddidaadda, dhererka xannibaadda iyo saxeexa bixiyaha daryeelka caafimaadka.
Daawooyinka iyo Daaweynta Iskuulka
Cudur iyo Cudur Faafa
Qorshayaasha Daryeelka Caafimaadka Shakhsiyeed (IHPs)
Waxqabadyada Caafimaadka ee Degmada
Foomamka Kale ee Caafimaadka
Maalinta ugu horreysa ee dugsiga, dhammaan ardayda dhigata Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale waa inay u hoggaansamaan Sharciga Tallaalka Minnesota. Ardayda looma oggolaan doono inay aadaan dugsiga illaa ay u hoggaansamayaan shuruudaha caafimaadka gobolka ee hadda jira. Ardayda galaya barnaamijyada carruurnimada hore, Xanaanada iyo fasalka 7aad waxay u baahan karaan talaal cusub.
Sida laga soo xigtay Waaxda Caafimaadka ee Minnesota, qoysaska aan helin tallaalka carruurtooda waxaa laga yaabaa inay khatar geliyaan iyaga iyo kuwa kaleba dhowr cudur. Cudurradan waxay sababi karaan dhibaatooyin caafimaad oo daran, oo ay ku jirto dhimasho. Carruurta Minnesota wali waxaa ku dhaca cuduro sida jadeecada, xiiq-dheerta (xiiq-dheerta), iyo bus-bus (varicella). Cuduradan waa kuwo faafa. Si dhakhso ah ayey ugu faafi karaan - gaar ahaan kooxaha carruurta ee aan qaadan tallaalkooda. Sidoo kale, qaar ka mid ah, sida xiiq-dheerta, ayaa aad uga daran carruurta marka loo eego kuwa waaweyn. Waad ku badbaadin kartaa carruurtaada adoo hubinaya inay helaan dhammaan duritaankooda.
Haddii aad su'aalo qabtid ama aad u baahan tahay caawimaad ku saabsan ilaha tallaalka, fadlan la xiriir dugsiga ilmahaaga.
Carruurtaadu Diyaar Ma U Yihiin? Sharciga Talaalka MN - Ingiriis
Carruurtaadu Diyaar Ma U Yihiin? Isbaanish
Carruurtaadu Diyaar Ma U Yihiin? Soomaali
Foomka Talaalka Ardayda ee Waaxda Caafimaadka Minnesota
Liis buuxa oo tallaal ah oo sharcigu u baahan yahay ayaa laga heli karaa Foomka Tallaalka Ardayda ee Waaxda Caafimaadka ee Minnesota. Ku soo lifaaq nuqul ka mid ah rikoodhka tallaalka ardayga ee bixiyehooda daryeel caafimaad foomkan. Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa foomkan inaad ku dalbatid ka-dhaafitaan shuruudaha tallaalka sababo caafimaad ama caqiido aad aaminsan tahay. Ka-dhaafitaannada sababa la xiriira caqiidada damiirka la qabo, waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo foomka ka-dhaafitaan nootaayo ah xafiiska caafimaadka.
Foomka Tallaalka - Ingiriis
Foomka Tallaalka - Isbaanish
Foomka Tallaalka - Soomaali
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan eeg Nidaamka Degmada 515-Daawaynta Ardayda.
Ardayda u baahan inay dawo ku qaataan dugsiga, fadlan buuxi foomka hoose sanad dugsiyeed kasta.
Maamulka Dawada inta lagu jiro Maalinta Dugsiga
Markay suurtagal tahay, qoysasku waa inay abaabulaan markaa muhiim maahan in shaqaalaha iskuulka ay daawo siiyaan arday. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xaalado marka caafimaadka ardaygu wax u dhimi karo iyada oo aan la helin daawo inta lagu jiro saacadaha dugsiga. Markaad u dirto wax dawo ah warqad dhakhtar ama daawo aan dhakhtar qorin sanad walba, qoysaska waa inay soo diraan:
Oggolaansho qoran (fiiri foomka, kore) shaqaalaha u oggolaanaya inay daawada maamulaan.
Amar qoraal ah oo ka yimid dhakhtarka (fiiri foomka, kor ku xusan) oo muujinaya baahida loo qabo daawo kasta, oo ay ku jiraan waa inta jeer ee la bixin karo. Dhakhtarku wuxuu fakis ugu diri karaa amarka dugsiga.
Daawada waa inay ku jirtaa weelka asalka ku qoran. Daawada laguu qoro, farmashiistaha ayaa ku siin doona weel calaamadeysan oo nuqul ah sidaa darteed mid ayaa lagu hayaa guriga midna waxaa lagu haysan karaa dugsiga. Weel kasta waa inuu lahaadaa lambarka taleefanka farmasiga, magaca ardayga, magaca dhakhtarka, magaca daawada, qiyaasta, waqtiga la siinayo iyo dariiqa (afka, neefta, iwm.).
Daawada lagu bixinayo iskuulka waa in lagu hayaa Xafiiska Caafimaadka. Ka-reebitaanku waa ardayda qaadi kara neefta neefta ama epipen, haddii ay haystaan amar dhakhtar oo qoran, oggolaansho waalid / ilaaliye qoraal ah oo ay ku sameeyaan oo muujiyeen kalkaalisada caafimaadka ee maamulka.
Kiniiniga nuska ah
Shaqaalaha Adeegyada Caafimaadka ayaan mas'uul ka ahayn jabinta kaniiniyada kala badh. Tan laguma samayn doono dugsiga. Marka uu jiro amar dhaqtar siinta nus kiniin ah, fadlan la hadal farmashiistahaaga.
Haddii ardaygaagu qaato maalin kasta ama sidii loogu baahdo, waxaad heli doontaa foom dhammaystiraya oo muujinaya haddii loo baahdo daawadan iyo in kale socdaallada socdaalka. Shaqaalaha Adeegyada Caafimaadka si joogto ah uguma raacaan ardayda safarada dibadda macalinka ayaa laga yaabaa inuu mas'uul ka noqdo maamulka daawada.
Habka Dhamaadka-Sannad Dugsiyeedka
Dugsiyada Aagga Robbinsdale uma soo diraan daawooyinka guriga ardayda inta lagu jiro sanad dugsiyeedka, oo ay ku jiraan maalinta ugu dambeysa dugsiga. Maalinta ugu dambeysa dugsiga, ardayda waxaa loo oggol yahay oo keliya inay iskiis u qaataan daawada neefta lagu neefsado iyo cirbadaha aan irbadda lagu dilin ee epinephrine home.
Qoysasku waxay mas'uul ka yihiin inay dhammaan daawooyinka kale ee ardayda si toos ah uga soo qaataan Xafiiska Caafimaadka. Daawooyinka aan la soo qaadin maalinta ugu dambeysa dugsiga ayaa loo tuurayaa qashinka dawooyinka. Keliya keen daawo kufilan oo soconaysa maalinta ugu dambeysa dugsiga si looga hortago in qashinka loo daadiyo daawada ardayda.
Ardaygu waa inuusan imaanin iskuulka (waana loo diri doonaa guriga iskuulka) hadii ay leeyihiin ama ay soo mareen:
Qandho dhan 100 darajo F (hadal ahaan) ama ka sareysa 24-kii saac ee la soo dhaafay iyada oo aan lahayn daawo yareeya qandhada
Matag ama shuban 24kii saac ee la soo dhaafay
Firiiric maqaarka ka mid ah oo aan la ogaanin
Maqnaanshaha ardayga waa in loo wargaliyaa dugsiga ardaygaaga. Intaa waxaa dheer, fadlan ogeysii dugsiga haddii ardaygaagu qabo xaalad la is qaadsiiyo sida busbuska, dhuunta cuncunka ama injirta madaxa. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan cudurada faafa waxaad ka heli kartaa tusmada hoose.
Ma Kufilan Yahay Inaan Aado Iskuulka
Ifilada (ifilada) waa cudur neef mareenka keena oo uu sababo virus ku dhaca sanka, cunaha, iyo sambabaha. Waxay noqon kartaa mid fudud, laakiin mararka qaarkood waa
daran oo mararka qaar nafta halis gelin kara. La mid maaha "ifilada caloosha."
Calaamadaha hargabka waxaa ka mid ah qandho, qufac qalalan, cuna xanuun, madax xanuun, daal fara badan, iyo jir xanuun. Astaamahan ayaa imanaya
si dhakhso ah ayey u socotaa oo waxay kugu noqon kartaa sariir aad u daran dhowr maalmood.
Dhamaan Ku Saabsan Hargabka (Ifilada)
Tiro sii kordheysa oo ardayda dhigata dugsiga oo leh xaalado caafimaad oo saameyn ku yeelan kara awooddooda ka-qeybgalka howlaha fasalka. Kalkaaliyeyaasheena shatiyeysan ee shatiyeysan (LSN) waxay horumarin doonaan qorshooyin daryeel caafimaad oo shaqsiyeed (IHPs) oo loogu talagalay ardayda baahiyahooda daryeel caafimaad ay saameyn ku yeeshaan, ama ay leeyihiin awood ay ku saameeyaan, helitaanka aaminka ah ee barnaamijyada waxbarashada iyo waxqabadka tacliimeed.
IHP waa dukumiinti qoran oo kor u qaadaya wada xiriirka iyo isku dubaridka daryeelka caafimaadka ee iskuulka. IHP waxay u ogolaaneysaa kalkaalisada caafimaadka ee iskuulka inay ogaato baahiyaha daryeelka caafimaadka, siiso dokumentiyo ku saabsan bixinta daryeelka caafimaadka iyo waxay bixisaa qorshe looga hortagayo xaaladaha degdega ah. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa qalab qiimeyn si loola socdo natiijooyinka caafimaadka.
LSNs waxay adeegsadaan go'aankooda xirfadeed si ay u go'aamiyaan haddii ardaygu u baahan yahay IHP; ardayda oo dhan uma baahna hal. IHP-yada waxaa lagu horumariyaa fikradaha ardayga, qoyska iyo bixiyaha xanaanada caafimaadka shatiga leh sida ugu haboon.
IHP-yada dib-u-eegis ayaa lagu sameeyaa ugu yaraan sanadkiiba, ama si dhakhso ah, sida ku xusan isbadalada ku dhaca xaalada caafimaad ee ardayga.
Dugsiyada Robbinsdale Area waxay u heellan yihiin caafimaadka iyo caafimaadka ardaydeena iyo shaqaalaheena. Macluumaad dheeri ah waxaa laga heli karaa Siyaasadeena Degmada 533-Fayo-qabka.
Dabaaldegyo Caafimaad leh
Dabaaldegyada dhalashada ee iskuulka ayaa siiya dariiq gaar ah oo loogu dabaaldego ardayda. Dugsiyadu ma oggola daaweyn dhalasho oo la cuni karo marka loo eego Nidaamka Degmada 533-Caafimaadqabka.
Macallimiintu waxay leeyihiin dariiq u gaar ah oo ay ku aqoonsadaan dhalashada dugsiga. Si kastaba ha noqotee, haddii qoysasku jeclaan lahaayeen inay u aqoonsadaan ardayga dhalashadiisa dugsiga, waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay sidaas sameeyaan
Ugu deeqid buug maktabadda fasalka iyo / ama xubin qoyska ka mid ah u keento oo u akhrido buug fasalka
Keenida funaanad ay ardayda fasalka wadaagaan iyo macallimiintuba si ay u saxiixaan
Abaabulka ciyaarta ama farsamada fasalka
Booqashada fasalka iyo kahadalka sida dhalashada looga xusayo wadanki hooyo
Wadaagista sheekada aad jeceshahay / sheekada / sheekooyinka aad kahesho dhaqankaaga
Hal abuur leh - la imow fikirkaaga oo aad ugu dabaaldegto dugsiga cunno la'aan (fadlan kala hadal macallinka ardaygaaga fikraddaada)
Waad ku mahadsan tahay taageerida jawi iskuul caafimaad qaba oo aamin ah!
Halkan waxaa ku yaal foomamka PDF-yada ee dheeraadka ah ee qoysaskeennu u baahan karaan inay galaan.
Qorshaha Waxqabadka Anaphylaxis (PDF)
Qorshaha Waxqabadka Neefta (PDF)
Qorshaha Waxqabadka Suuxdinta iyo Su'aalaha Su'aalaha Waalidka / Masuulka (PDF)
Foomka Macluumaadka Caafimaadka Ardayda - Ingiriis (PDF)
Foomka Macluumaadka Caafimaadka Ardayda - Isbaanish (PDF)
Foomka Oggolaanshaha Daawada Xanuunka Aan Qorayn ee Fasalka 7aad-8aad (PDF)
Foomka Oggolaanshaha Dawada Xanuunka Aan Xanuunka lahayn ee Fasalka 9aad-12aad (PDF)